Hydralazine HCL powder (304-20-1) hplc≥98% | Yakarura R & D Reagents
KUDZIDZWA kwakaitwa nekugadzirisa uye kukwanisa kugadzira kubva ku gram kusvika kuhutano hwe Hydralazine HCL powder (304-20-1), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Hydralazine HCL powder iyo vasodilator iyo inoshanda nokuzorodza misumbu mumidziyo yako yeropa kuti ivabatsire kuwedzera (kuwedzera). Izvi zvinoderedza kuwedzera kweropa uye kunobvumira ropa kuti riyerere nyore nyore kuburikidza nemavetin uye arteriyo.
Hydralazine hydrochloride powder mukushandiswa
Mazita emagetsi: Apresoline
Zita rechizvarwa: Hydralazine HCL powder (Kutumidzwa: hye DRAL a zeen)
Hydralazine HCL powder inoshandiswa kuporesa ropa rakanyanya. Hydralazine hydrochloride powder iri mukirasi yemishonga inonzi vasodilators. Inoshanda nokudzikinura midziyo yeropa kuitira kuti ropa ribude nyore nyore kuburikidza nemuviri.
Kuwedzera kweropa rega kunowanzoitika uye kana isingarapwa, kunogona kukanganisa uropi, mwoyo, mutezo weropa, itsvo nedzimwe nhengo dzomuviri. Kukuvadza kune nhengo idzi kunogona kukonzera chirwere chemwoyo, kurwisa kwemwoyo, kushungurudzika kwemoyo, kurohwa, hosha kusakundikana, kurasikirwa kwemaonero, nezvimwe zvinetso. Mukuwedzera pakutora mishonga, kugadzirisa mararamiro eupenyu kuchabatsira zvakare kudzora ropa rako. Iko kushandura kunosanganisira kudya kudya kunenge kwakaderera mumafuta uye munyu, kuchengetedza uremu hwakanaka, kushandisa zvisungo zve30 mazuva akawanda, kusasvuta, nekushandisa doro mumwero.
Ndeipi iyo inonzi Hydralazine hydrochloride powder
Hypertension muvarwere vakuru:
Tanga kurapwa pamutengo wakaderera uye kuwedzera zvishoma nezvishoma zvichienderana nemhinduro yomunhu mumwe nomumwe. Iyo inowanzoburudzirwa kutanga regimen ndeye 10 mg muromo kane nguva zuva nezuva yekutanga 2 kune mazuva 4, kuwedzera kusvika ku25 mg kane zuva rimwe nerimwe kwezvasara vhiki yekutanga.
Kwemavhiki epiri uye anotevera, wedzerai kuyerwa ku 50 mg kane zuva rega rega (kuwedzera chiremba ne 10-25 mg / chirwere zvishoma nezvishoma mazuva ose e2-5).
Zuva rezuva rose rekushandisa rinoshandiswa muongororo yepiriniki ndeye 300 mg.
Nhamba yekutanga yekurapa mwoyo kukanganisa ndeye 10 ku 25 mg muromo 3 kusvika ku4 nguva zuva nezuva.
Chirwere chinowanzoitwa 225 kusvika 300 mg zuva nezuva mu 3 kusvika ku4 doses diki.
Nokuda kwehutachiona hwehutachiona hwekukurumidza, chirwere chacho chiri 0.5 mg / Kg IV maawa ose e4.
Iyo Hydralazine HCL poda inoshanda sei
Hydralazine HCL powder inoshandiswa kuporesa ropa rakanyanya (hypertension). Inoshandiswawo kudzora kukwirira kweropa mumamai panguva yekuzvitakura (pre-eclampsia kana eclampsia) kana mumamiriro ezvinhu akaoma apo ropa rinonyanya kukwirira (hypertensivecrisis).
Kuwedzera kweropa kunowedzera kubasa kwemoyo nemariti. Kana ichienderera kwenguva yakareba, mwoyo nemariti inogona kushanda zvakanaka. Izvi zvinogona kukanganisa midziyo yeropa yeuropi, mwoyo, neitsvo, zvichiita kuti urove, mwoyo kusagadzikana, kana kushaya mafungiro. Kuderedza ropa kunogona kuwedzera njodzi yekurwadziwa kwepfungwa uye kurohwa.
Hydralazine hydrochloride powder inoshanda nokudzikinura midziyo yeropa uye kuwedzerwa kugoverwa kweropa neroksijeni kusvika pamwoyo nekuderedza basa rayo.
Iwe haufaniri kushandisa mishonga iyi kana uri weergorgia kuHydralazine hydrochloride powder, kana iwe une chirwere chetachiona cheronumatic, kana chirwere chemwoyo chinokonzera mitral valve.
Usati watora Hydralazine HCL powder, udza chiremba wako kana une chirwere chepfungwa, lupus, angina pectoris (chirwere chepfupa), kana kuti iwe wakambove urohwa.
Paunenge uchitora Hydralazine hydrochloride powder, usarega kukwira zvakakurumidza kubva pakagara kana nzvimbo yakarara, kana iwe unganzwa uchinetseka. Simuka zvishoma uye uzvigadzirire iwe pachako kuti udzivise kuwira.
Dana chiremba wako kamwechete kana iwe uine shanho yakakomba yakadai sekukurumidza kana kuputika maitiro emoyo, kupfugama, kupera kana kutinhira, ruvara ruvara rwemavara, marwadzo akabatana kana kuputika nefivhiri, kurwadziwa kwepfupa, kushaya simba kana kunzwa kuneta, uye kunyorera zvishoma kudarika nguva kana kwete zvachose.
Kuti uve nechokwadi chokuti iyi mishonga iri kubatsira mamiriro ako ezvinhu uye haisi kukonzera zvinokuvadza, ropa rako rinoda kuongororwa kazhinji. Iwe unogonawo kudiwa dzimwe nguva kuongororwa ropa. Usapotsa chero sarudzo dzakarongwa.
Ramba uchishandisa Hydralazine HCL powder sezvinorayirwa, kunyange kana iwe uchinzwa zvakanaka. Kuwedzera kweropa rega kazhinji kusina zviratidzo, saka iwe unogona kunge usingazivi kuti ropa rako rinorevei. Iwemay unoda kushandisa mishonga yeropa ropa kwehupenyu hwako hwose.
Ko Hydralazine hydrochloride powder Iine Matambudziko Api
kutsanya kana kuvhara zvipfeko zvepfungwa;
kuzvimba muchiso chako, mumimba, maoko, kana tsoka;
kupera, kupisa, marwadzo, kana kunzwa kunetseka;
kunzwa sokunge iwe unogona kupfuura;
kuvhiringidzika, pfungwa dzisina kunaka kana mufambiro;
ganda rakasvibirira, nyore kupwanya;
kunorwadza kana kuoma kuoma;
kurinha zvishoma kudarika nguva kana kwete kana zvachose; kana
kurwadziwa pamwe chete kana kupfurikidza nefivha, kurwadziwa kwepfupa, kushaya simba kana kunzwa kuneta.
kushungurudza, kurutsa, kurasikirwa nechido;
maronda kana kurwadziwa;
runny kana pfumbu yakakosha; kana
kuora kunora kana kuputika kweganda.
Nzira yekutenga Hydralazine HCL powder kubva paAASraw
Hydralazine HCL (304-20-1): Basa & Dosage Nemigumisiro Yemaodzanyemba
Hydralazine HCL (304-20-1) inoshandiswa kuporesa ropa rakanyanya